WordTracker ကို သုံး၍ သင်၏မေးခွန်းနှင့်အကြောင်းအရာအဖြေများတည်ဆောက်ရန် Martech Zone
WordTracker ကို အသုံးပြု၍ သင်၏မေးခွန်းနှင့်အကြောင်းအရာအဖြေများကိုတည်ဆောက်ရန်
အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 1, 2016 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကိရိယာများစွာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်ပြီး ပို၍ ပင်စမ်းသပ်သည်။ ငါပြီးပြည့်စုံသောသော့ချက်စာလုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းဗျူဟာတခုခုလုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကိရိယာတစ်ခုကအမြဲတမ်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုပါ။ ငါမကြာခဏလပေါင်းများစွာကမထိဘူး ... မကြာခဏ subscription ကိုကျဆင်းသွားစေပေမယ့်ပြီးတော့ ...
WordTracker ပါ ငါမယုံနိုင်လောက်အောင်ကျယ်ပြန့်ပြည့်စုံသောမေးခွန်းများကိုရှာဖွေသူအသုံးပြုသူများသည်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီကိုရှာဖွေသောအခြား tool ကိုမတှေ့နိုငျသောကွောငျ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြပြီးပြီ ပြီးပြည့်စုံသောအကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အတွက် - ဒီစာကြည့်တိုက်ရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သုံးစွဲသူတွေ ၀ င်လာတဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏တောင်းဆိုမှုများနှင့်ပါတ်သက်ပြီးပိုမိုတိကျခိုင်မာလာသည်။ ဤသည်သည်သူတို့၏စာကြည့်တိုက်ကိုပြီးစီးရန်ရှာဖွေနေသည့်မည်သည့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်အတွက်မဆိုရွှေတွင်းဖြစ်သည်။
၏အပြာရောင်ဘားအတွင်း WordTracker ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုထည့်သွင်းရန်၊ ဖယ်ထုတ်ရန်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသံအတိုးအကျယ်ကိုသတ်မှတ်ရန်၊ သော့ချက်စာလုံးမေးခွန်းများ။ သော့ချက်စာလုံးမေးခွန်းများစစ်စစ်ကိုသာကျင့်သုံးပါ၊ ပြီးခဲ့သည့်လကရှာဖွေခဲ့သည့်လူကြိုက်အများဆုံးမေးခွန်းများကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ခင်းကျင်းပြသခြင်းဖြင့်သင်ရရှိသည်။
စန်း! လူများသည်သမိုင်းကြောင်းအရရှာဖွေခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်များရောင်းချနေသည့်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက်ပုံစံတစ်ခုကိုလည်းပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် e-commerce ၀ န်ဆောင်မှုခံယူနေပြီး ၄ င်းတို့၏ကတ်တလောက်တွင်ဆေးဝါးထုတ်ကုန် ၁၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ မေးခွန်းပုံစံကိုဖြိုခွဲခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာတိုင်းသို့မဟုတ်သီးခြားဆောင်းပါးများတွင်ပြည့်စုံစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ပေးရမည့်အကြောင်းအရာများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
အဓိပ္ပာယ် - [ထုတ်ကုန်အမည်] ကဘာလဲ?
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - [ထုတ်ကုန်အမည်] တွင်ဘာတွေပါသနည်း။
ဆေးတခါသောက် - ရောဂါလက္ခဏာကိုသက်သာစေရန် [ထုတ်ကုန်အမည်] ဘယ်လောက်လိုအပ်ပါသလဲ။
လြှောကျလှာ - [ထုတ်ကုန်အမည်] သက်သာခြင်းရှိပါသလား။
လက္ခဏာ - ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေကိုသက်သာအောင်လုပ်ရမလဲ။
Tags: သော့ချက်စာလုံးမေးခွန်းများkeyword ကိုသုတေသနပြုကိစ္စများwordtracker
8 အောင်မြင်သော Account-based Marketing နည်းစနစ်ကိုခြေလှမ်းများ
Big Data သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို Real-Time သို့တွန်းပို့နေသည်